InqilaabKa Dhici Lahaa Dalka Eritrea Oo Fashilmay - Ilays News
InqilaabKa Dhici Lahaa Dalka Eritrea Oo Fashilmay
November 2, 2019 admin1
Dowladda Eritrea ayaa soo saartay warmurtiyeed aan horay looga baran iyada oo warmurtiyeedkeeda ku eedeysay iney laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA ay Eritrea u maleegtay afgambi. Waxayna xukumadda Asmara warmurtiyeedkeeda carrabka ku dhufatay laanta sirdoonka Israa’iilna iney afgambigaasi la damacsanaa gacan ka geysatay.
Dowladda Eritrea waxay sheegtay in afgambigi Militari lala damacsanaa sanadka marka uu ahaa 2011-ka, balse hadda ay heleen macluumaad dhammeystiran oo afgambiga la damacsanaa muujinaya.
Afgambigi la damacsanana waxaa qayb ka ahaa ayey tiri xukumadda Asmara in kacdoonna shacab gudaha Eritrea laga abaabulo si awoodda dowladda loo wiiqo
Eritrea: 6 arrimood oo lama filaan kuugu noqon kara
Shirkadda diyaaradaha Eritrea oo u duushay Addis Ababa
Maxay tahay sababta uu Madaxweynaha Eritrea u tagay Muqdisho?
Warmurtiyeedka ka soo baxay xukumadda Asmara oo ku qornaa afka Tigreega waxaa si toos ah looga magac dhabay shaqsiyaadka iyo laamaha afgambiga loo maleegayey ka qayb qaatay ee ay sheegtay iney ku kulmeen magaalada Nairobi.
Hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qoxootiga ee UNHCR waxay CIA ku amartay inuu gacan ka geysto sidi ay shacabka Eritrea uga qixi lahaayeen dalkooda waa sida warmurtiyeedka Xukumadda Asmara lagu sheegaye.
“Kooxaha afgambiga maleegayeyna” kooxda qaranka kubadda cagta Eritrea iney dalkooda ka baxsadaan oo ay waddamo kale magangalyo weydiistaan ayey ku dhiirragelinayeen ayaa lagu yiri warmurtiyeedka.
Waxaana taa tusaale ugu filan kooxda kubadda cagta Eritrea oo Nairobi ciyaar kaga qayb galayey ee diiday iney dalkooda dib ugu noqdaan.
Dhawaanna waxaa dalka Uganda iska dhiibay afar ciyaartooy oo Eritrea u dhashay oo noolal dhuumaaleysi ah oo cabsi badan ku jooga dalka Uganda ayey Asmara ku sheegtay warmurtiyeedkeeda.
Laanta Sirdoonka Israa’iilna waxay ka shaqeyneysay ayey tiri warmurtiyeedka Asmara ka soo baxay iney diyaariso xoga been ah oo ku saabsan iney xukumadda Asmara ay xiriir la leedahay kooxaha argagixisada ee Bariga Dhexe ka dhaqdhaqaaqa.
Iyada oo ay Moosad marar badan saraakiisha sarsare ee ka tirsan ciidamada Eritrea ay ku eedeysay iney ka shaqeeyaan tahriibinta dadka.
Waxyaabaha kale ee lagu sheegay xogta sirta ay shaacisay dowladda Eritrea waxaa ka mid ah:
“Dowladda Eritrea inuu si fudud isbeddel uga dhaco ma aha mid suuragalayo, sidaa darteed dowladda Eritrea si looga takhaluso, in la adeegsado xoogag dibadeed oo aqoon u leh ciidanka Eritrea iyo sida ay u shaqeeyaan ay lagama maarmaan tahay. Dowladda shuruudahaasi buuxin kartana ay tahay maamulki wayaanaha uu horkacayey ee Addis Ababa ka arriminayey” ayey tiri.
Dokumantiga sirta ee ay shaacisay xukumadda Asmara ee ay warmurtiyeedkeda ku sheegtay waxaa kale oo ka mid ahaa: “Dowladda Itoobiya awoodda ciidan uu dalka Eritrea leeyahay daraasadda ku saabsan ee loo soo gudbiyey inuu yahay mid dhab ah oo muddo gaaban suuragelin karo in xukumadda Asmara laga takhaluso, laakiin waxaa lagu wargeliyey ‘iney degdegin’.”
“Balse iyagu waxay damacsanayaayeen dagaalki dhacay 1998 kaddib iney rabeen markale iney dagaal soo qaadaan. Dowladda Eritrea si loo afgambiyana Qaramada midoobay iyo Hay’adaha bahwadaagta la ahna waxay Itoobiya xilligaasi ka heleysay taagero buuxda.
Dowladda Eritrea sababata ay warbixintan xasaasiga ee ay muddo qarineysay xilligan ugu soo beegtay ayaan caddeyn.
Iskudaygi loo sameeyey iney dowladaha Mareykanka iyo Israa’iil iney eedda loo soo jeediyey jawaab ka bixiyaanna ma noqon mid suuragasha